အဘယ်အရာကိုပါဘူးအမေရိကန်တွေတန်ဖိုးက? | ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်သတင်းအချက်အလက် | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
အမေရိကန်တန်ဖိုးများကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်အမေရိကန်များရန်အရေးကြီးပါသည်အဘယ်သို့သောအကြောင်းလေ့လာသင်ယူ. Read why Americans value independence, equality, and being on time. You will see why Americans are direct and informal and why competition, work ethic, and buying things are all important in the USA.
သင့်နိုင်ငံမှာ, သငျသညျဖြစ်ကောင်းသင်တန်ဖိုးထားကြောင်းခိုင်မာတဲ့အစဉ်အလာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုခဲ့. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, အရေးကြီးသောအမေရိကန်တန်ဖိုးများလည်းရှိပါတယ်. ဤရွေ့ကားအမေရိကန်တွေဖို့အရေးအပါဆုံးသောအရာဖြစ်ကြ၏.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အဓိကတန်ဖိုးများတစ်ခုမှာလွတ်လပ်ရေးဖြစ်ပါသည်. လွတ်လပ်ရေးနေ့တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးချင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်. အမေရိကန်တွေ Self-မှီခိုဖြစ်ခြင်း၏အလွန်ဂုဏ်ယူကြသည်, သို့မဟုတ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဂရုစိုက်နိုင်ဖြစ်ခြင်း, သူတို့အခြားသူတွေအဖြစ်ကောင်းစွာ Self-မှီခိုဖြစ်သင့်စဉ်းစားလေ့. တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိသည့်အခါ, ကြောင်းပုံမှန်အားဖြင့်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကြိုးစားမှု၏ရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်နေသည်. ဒီပိုစုပေါင်းနေသောများစွာသောအခြားယဉ်ကျေးမှုများအတွက်ထက်ကွဲပြားခြားနားသည်. စုပေါင်းယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလုံးမိသားစုသို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုရောင်ပြန်ဟပ်မှုအဖြစ်အောင်မြင်မှုများကိုမြင်ရလေ့.
အမေရိကန်ကလေးငယ်များအစောပိုင်းကအခြားယဉ်ကျေးမှုအတွက်ထက်အိမ်မှာထားခဲ့ဖို့လေ့. ဥပမာ, အထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရပြီးနောက်, ကလေးအတော်များများကောလိပ်ကိုသွားသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်စတင်ရန်ထုတ်ရွှေ့. သူတို့အိမ်မှာအသက်ရှင်ရန်ဆက်လက်ပါလျှင်, သူတို့ငှားပေးဆောင်သို့မဟုတ်အိမျတျောကိုအထောက်အကူပြုဖို့တောင်းစေခြင်းငှါ.
အမေရိကန်တွေတန်ဖိုးကကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အာကာသ. privacy ကိုလိုအချို့သောယဉ်ကျေးမှုအတွက်မကောင်းတဲ့အရာအဖြစ်ထင်ရှားစေခြင်းငှါနေစဉ်, အများအပြားအမေရိကန်တွေတစ်ဦးတည်းအချိန်ရှိသည်လိုခြင်းနှင့်အချို့သောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. ပုဂ္ဂလိကဖြစ်နိုင်သည်.
ဤတွင် privacy ကို၏အမေရိကန်တန်ဖိုး related အနည်းငယ်အခြေအနေများများမှာ:
ပြောဆိုမှုများအတွက်, အများအပြားအမေရိကန်တွေအခြို့သောအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. ပုဂ္ဂလိကဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကိုအကြောင်းပြောဆိုချင်ကြပါဘူး, ထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏အသက်အရွယ်အဖြစ်, ငွေဘယ်လောက်သူတို့ကလုပ်, သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏နိုင်ငံရေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဘာသာရေးအမြင်များ. သူတို့စိုးရိမ်ကြောင့်အချို့လူများကအများပြည်သူတွင်ဤဘာသာရပ်များအကြောင်းပြောနေတာမကြိုက်ဘူးကြောင့်လူတွေငြင်းခုန်စေမည်. သို့သော်, သင်တို့သည်ဤသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုရှိပါက, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုတောငျးဆိုနိုငျ. အများစုကအမေရိကန်နိုင်ငံသားအမေရိကန်တွေကမ္ဘာကြီးကိုရှုမြင်ပုံကိုအကြောင်းသင့်သင်ပေးဖို့ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်.
အမေရိကန်တွေကိုမကြာခဏတစ်ဦးချင်းစီကတခြားသည်အခြားယဉ်ကျေးမှုများရှိလူများထက်အများပြည်သူအခြေအနေများပိုမိုအာကာသပေး. သူတို့အကြား space ကိုအနည်းငယ်နှင့်အတူရပ်တည်ရန်လေ့, ဆန့်သောလက်ရုံးတော်၏ပုံမှန်အားဖြင့်အကွာအဝေး.
အတော်များများကအမေရိကန်တွေသူတို့ privacy ကိုရှိသေချာစေရန်၎င်းတို့၏အိမ်များန်းကျင်ခြံစည်းရိုးများ. သင်၏သားသမီးတစ်ဦးသည်အိမ်နီးချင်းရဲ့ခြံစည်းရိုးကျော်တဲ့ဘောလုံးကိုသို့မဟုတ်အခြားအရုပ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့လျှင်, ကခြံစည်းရိုးကိုကျော်ခုန်နှင့်ကစားစရာ retrieve မှယေဘုယျအားဖြင့်မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်. အစား, အိမ်ရှေ့တံခါးသွားပါနှင့်ခေါင်းလောင်းခေါက်သို့မဟုတ်မြည်. မထူးလည်းမရှိဆိုပါကတံခါးကိုအပေါ်မှတ်စုတစ်ခုစွန့်ခွာ, 8 နှင့်ည 8 နာရီမှာအကြားကစားစရာ retrieve လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်း. ဒါဟာလေးစားမှုနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်, တချို့လူတွေကအစောင့်ခွေးရှိသည်သို့မဟုတ်သူတို့ရဲ့ privacy ကိုအလွန်အကာအကွယ်ဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်. အထူးသဖြင့်အကွီးအကဲမြားပုံမှန်အားဖြင့်ပိုပြီးငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တိတ်ဆိတ်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်နှောင့်အယှက်ခံရဖို့မလိုချင်ပေမည်. သင်တစ်ဦးတံခါးဝဖွင့်လှစ်လိုလျှင်သင်ကပိတ်ဖို့ရမယ်. သို့သော်, သငျသညျတခုဖွင့်လှစ်တံခါးလာလျှင်, ပွင့်လင်းသူကစွန့်ခွာ.
အိပ်ခန်းများများသောအားဖြင့်ပုဂ္ဂလိကနေရာများအဖြစ်ယူဆနေကြသည်. အိမ်နီးချင်းများနှင့်မိတ်ဆွေများမီးဖိုချောင်အတွက်ဧည့်ခံကြသည်, ထမင်းစားခန်းသို့မဟုတ်ဧည့်ခန်း. မိဘများနှင့်ကလေးများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အိပ်ခန်းရှိသည်ဖို့လေ့, မကြာခဏ, အမေရိကန်ကလေးငယ်များအသီးအသီးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အိပ်ခန်းများ.
သူများသည်သင့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၌ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်မည်အကြောင်း privacy ကိုပဲတချို့ဥပမာများမှာ.
အမေရိကန်တွေကိုမကြာခဏအလွန်တိုက်ရိုက်များမှာ. ဒါကသူတို့မကြာခဏသူတို့ထင်သင်သည်အဘယ်သို့ပြောသူတို့လိုချင်တာတွေအကြောင်းကိုမှနျကွောငျးဝနျခံသောဖွစျလိမျ့မညျကိုဆိုလိုသည်. မှနျကွောငျးဝနျခံသောဖြစ်ခြင်းကိုယေဘုယျအားအမေရိကရှိကောင်းတစ်ဦးအရာအဖြစ်ရှုမြင်နေသည်.
ဤတွင်အမေရိကန်စတိုင် Direct အချို့ကိုဥပမာများမှာ:
အချို့သောယဉ်ကျေးမှုခုနှစ်တွင်, ဥပမာ - တစ်ဦးဖိတ်ကြားချက်ကိုကျဆင်းရိုင်းစိုင်းက, တစ်စုံတစ်ဦးကနေ့လယ်စာအဘို့အသငျသညျတောငျးလြှငျ, သငျသညျဟုတ်ကဲ့ပြောပါစေခြင်းငှါ, ထိုအခါမူကား, နေ့လည်စာမသွား. အမေရိကမှာ, ဒါကြောင့်ပြောနီးပါးအမြဲ သာ. ကောင်း၏, “အဘယ်သူမျှမ, သို့သော်သင်ကျေးဇူးတင်” သို့မဟုတ်, “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ငါမူကားအခြားကတိကဝတ်ရှိသည်။” အကယ်. သင် invitation မှဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောပေမယ့်အဖြစ်အပျက်မှမသွားဘူး, လူတစ်ဦးစိတ်ဆိုးရစေခြင်းငှါ,.
စကားပြောဆိုမှုအတွက်, အမေရိကန်ကသင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုသဘောမတူလျှင်, သူတို့သည်သင့်အားပြောစေခြင်းငှါ,. ဤသည်မှာသူတို့သည်သင့်ကိုကြိုက်ကြဘူးမဆိုလိုပါ, ပဲသူတို့တစ်တွေကွဲပြားခြားနားသောအယူအဆရှိစေခြင်းငှါ.
၏စိတ်ကူး “မကျြနှာကိုဆုံးရှုံး” America မှာအတူတူပင်မဟုတ်ပါ. များအတွက်ဘာသာပြန်ချက် “မကျြနှာကိုဆုံးရှုံး” ပါလိမ့်မယ် “ရှက်,” ဒီထက်လေးနက်သောအရာ. အမေရိကန်တွေသူတို့ဝေဖန်နေကြသည်ဆိုပါကရှက်ဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အမှားလုပ်တတ်မည်အကြောင်း, ဥပမာ. ဒီတော့အမေရိကန်တွေကအမှားတွေကိုထောက်ပြသို့မဟုတ်သင်ဝေဖန်စေခြင်းငှါ, ရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးဆုံးမပဲ့ပြင်သို့မဟုတ်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်အဖြစ်ရည်ရွယ်.
အတန်းထဲတွင်, အမေရိကန်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဆရာ, ဆရာမစိန်ခေါ်စေခြင်းငှါ’ စိတ်ကူးများ. အချို့သောယဉ်ကျေးမှုခုနှစ်တွင်, သင့်ရဲ့ဆရာနှင့်အတူသဘောမတူမှမယဉျကြေးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
ဒါဟာအကူအညီတောငျးဖို့ရိုင်းစိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်တစုံတခုကိုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်အိမ်နီးချင်းသငျသညျတောငျးလြှငျ, သူတို့အမှန်တကယ်ကူညီပေးလို. ပြောအခမဲ့ခံစားရ, “သင်စတိုးဆိုင်သွားကြသည်နှင့်အသင်လိမ္မော်သီးတို့ကလမ်းလျှောက်ခဲ့လျှင်, တစ်အိတ်ငါ့ကိုချီကောက်ကျေးဇူးပြုပြီး, ငါသူတို့အဘို့သင်သည်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။” သို့မဟုတ်, သငျသညျဥပမာရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအဝတ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်, နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့ကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘယ်အရပ်သေချာမဟုတ်ပါဘူး, မေးရန် OK ကိုက, “သငျသညျကြှနျုပျသကလေးများအတွက်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့အင်္ကျီနဲ့ဖိနပ်မဝယ်နိုင်မည့်အဘို့မဆိုအကြံပြုချက်များရှိသည် Do?” အများစုမှာအမေရိကန်တွေကိုကူညီကိုချစ်, နှင့်ကောင်းမွန်သောမိတ်ဆွေများနှင့်အိမ်နီးချင်းများဖြစ်လာရန်အနည်းငယ်သာအားပေးမှုကိုလိုအပ်.
ယေဘူယျအားဖြင့်, အဘယ်အရာကိုရိုင်းစိုင်းထင်ရှားစေခြင်းငှါလမ်းမရည်ရွယ်ကြောင်းမှတ်မိဖို့ကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. အမေရိကန်တွေရိုင်းစိုင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေကြသည်မဟုတ် - သူတို့ပဲတိုက်ရိုက်ဖြစ်ခြင်းနေကြတယ်.
လွတ်လပ်ရေးအမေရိကန်ကြေညာစာတမ်းမိန့်, “လူအားလုံးတူညီသောအခွင့်အရေး Equal Created နေ။” အဖြစ်မှန်မှာတော့, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအချို့သောလူတွေကအမြဲညီတူညီမျှအားလုံးနိုင်ငံသားတွေပြုမူဆက်ဆံကြဘူး, ဒါပေမယ့်အများကြီးအမေရိကန်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရ စိတ်ကူး တန်းတူရေး၏. လူအပေါင်းတို့သည်ထိုကဲ့သို့သောအာဖရိကန်အမေရိကန်၏ကျွန်ပြုမှုအဖြစ်တန်းတူကုသမခံခဲ့ရပါရှိရာအမေရိကန်သမိုင်းကြောင်းတွင်အများအပြားဥပမာရှိပါတယ် (အနက်ရောင်) နိုင်ငံသားများ. သို့သော်, အမေရိကန်တွေလူအားလုံးတန်းတူအခွင့်အလမ်းများရှိသင့်သောစိတ်ကူးယုံကြည်လို. ဒါကစိတ်ကူးပုဟုခေါ်သည်အရာကိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် “အမေရိကန်အိပ်မက်။” အတော်များများကအစောပိုင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအမေရိကန်အိပ်မက်ကိုလိုက်နာဖို့အမေရိကသို့ပြောင်းရွှေ့. သူတို့ကသငျသညျခက်အလုပ်လုပ်ခဲ့လျှင်ယုံကြည်, သငျသညျလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတက်ရွှေ့နိုင်.
ယနေ့တွင် ပို. ပို. လူဦးအမေရိကန်အိပ်မက်မမှန်ပါဘူးနားလည်သဘောပေါက်. အလွန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်သောသူလူအတော်များများအလွန်ပိုက်ဆံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. မကြာခဏဆိုသလိုအခွင့်ထူးခံနောက်ခံကနေလာကြသူတွေကိုကမ္ဘာပေါ်မှာတက်ရွေ့လျားကာပိုမိုလွယ်ကူအချိန်ရှိသည်. နေဆဲ, တန်းတူရေး၏စိတ်ကူးကိုအမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှု၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
တစ်ဦးစာသင်ခန်းထဲမှာ•, ကျောင်းသားအားလုံးသူတို့ရဲ့ဆရာ, ဆရာမများကညီတူညီမျှဆက်ဆံသင့်. အဘယ်သူမျှမကျောင်းသားမျက်နှာသာရပါမည်.
•ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့သည်အညီအမျှဆက်ဆံသင့်, လူအမျိုးသမီးတွေထက်ပိုကောင်းတဲ့အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်မဟုတ်. အဖြစ်မှန်မှာတော့, များစွာသောမိန်းမနေဆဲအမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းယောက်ျားကဲ့သို့တူညီသောအဆင့်အတန်းကိုမရှိဘူး, အထူးသဖြင့်သူတို့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ငွေဘယ်လောက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌.
• အမေရိကမှာ, တစ်ဦးအားပြင်းထန်စွာ embedded လူမှုရေးအဆင့်ဆင့်သို့မဟုတ်ဇာတ်စနစ်ကမရှိ. တခါတရံသငျသညျလေးစားမှုဖြင့်သင်တို့ကိုဆက်ဆံဖို့မျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါ, သူတွေကိုတန်းတူသကဲ့သို့သင်တို့ပြုမူဆက်ဆံစေခြင်းငှါ. ဥပမာ, ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနာမည်ဖြင့်အဟောင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူကိုခေါ်စေခြင်းငှါ. ဤသူသည်သင်တို့မှဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်, သူတို့ရိုင်းစိုင်းဖြစ်ခြင်းကြသည်မဟုတ်သတိရဖို့ကြိုးစား, ဒါပေမယ့်သူတို့တစ်တွေကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုး.
•သူတို့ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ပေးသည့်အခါတခါတရံအမေရိကန်တွေကိုသူတို့ဖြေရှင်းခံရဖို့ပိုနှစ်သက်သင်မည်သို့ပြောပြလိမ့်မယ်. ဆရာသို့မဟုတ်ဆရာဝန်တစ်ဦးအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ခဲ့လျှင် “Lucy” သို့မဟုတ် “ဆရာဝန် Lucy”, သင်တို့ကိုသူမ၏ဖြေရှင်းသင့်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်. သူမကဒေါက်တာအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ခဲ့လျှင်. Wilson က, မိန်းမဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်ကားအဘယ်သို့.
နေဆဲလူတို့တွင်မမြင်ရတဲ့အပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းရှိစေခြင်းငှါသိရန်အသုံးဝင်သည်. ဤရွေ့ကားတစ်ဦးချင်းအောင်မြင်မှုအပေါ်ပိုပြီးအခြေခံလေ့: ဥပမာ, တစ်စုံတစ်ဦး၏အလုပ်, ဥစ္စာဓန, သို့မဟုတ်ပညာရေး.
အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုအလွတ်သဘောဖြစ်ပါတယ်. အမေရိကန်တွေကိုမကြာခဏပင်ဘုရားကျောင်းဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်. Amancay Maahs နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ.
•အမေရိကန်များနှင့်အနောက်တိုင်းဝတ်စားဆင်ယင်စေခြင်းငှါ, ထိုကဲ့သို့သောပင်အလုပ်မှာဂျင်းဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ဘောင်းဘီတိုဝတ်ထားအဖြစ်, ကြောငျး, သို့မဟုတ်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း. သင်ပထမဦးဆုံးအလုပ်စတင်နိုင်သည့်အခါ, သငျသညျပတျဝနျးကငျြရှိလူဦးဝတ်ထားနေကြတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်အခြေခံပြီးပိုပြီးဖဲကြိုးဖြတ်ဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့, ပြီးတော့သင့်ရဲ့ခါးပန်းကိုရွေးချယ်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
•တစ်စုံတစ်ဦးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါ, အမေရိကန်တွေပြောလေ့, “မင်္ဂလာပါ” သို့မဟုတ်, “ဟလို။” သင်ကတူညီတဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းသည်သင်စကားပြောနေကြသည်သောသူမရှိကိစ္စကိုသုံးပါ: သင်၏သားသို့မဟုတ်သင့်သား၏ဆရာမ. အဆိုပါ langauge နှုတ်ဆက်ခြင်း၏တရားဝင်နှင့်အလွတ်သဘောပုံစံများရှိသည်ပါဘူး.
•အမေရိကန်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအမည်များအားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုခေါ်လေ့. အချို့သောအခြေအနေများတွင်, သို့သော်, ဥပမာ - ကိုပိုပြီးတရားဝင်ဖြစ်ဖို့နဲ့သင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနာမတော်ကိုအသုံးပြုဖို့တောင်းသည်အထိနောက်ဆုံးအမည်များကိုသုံးစွဲဖို့ပိုကောင်းက, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအခြေအနေမှာသို့မဟုတ်ကျောင်းမှာ.
အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှု၏သတင်းအချက်အလက်များသင်အံ့သြသွားစေခြင်းငှါနေစဉ်, ကရိုင်းစိုင်းဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်. တကယ်တော့, တစ်စုံတစ်ဦးကအလွတ်သဘောသင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏နှင့်သင့်ပထမဦးဆုံးနာမတော်အားဖြင့်သင်တို့ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်, ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဖော်ရွေလမ်းအတွက်သူတို့သညျထင်ဆိုလိုတယ်.
အမေရိကန်တွေအပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်မကြာခဏမိမိတို့၏ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်နိုင်. ယှဉ်ပြိုင်မှုမကြာခဏအလွန်အလုပ်များဖြစ်အမေရိကန်တွေကိုဦးဆောင်. အတော်များများကအမေရိကန်တွေယှဉ်ပြိုင်မှုကောင်းတစ်ဦးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ရှုမြင်.
•အမေရိကန်တွေလှုပ်ရှားမှုများအများကြီးအချိန်စာရင်းပါလိမ့်မယ်. သူငယ်တို့သည်လည်းကျောင်းမှပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအများကြီးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်, ထိုကဲ့သို့သောအားကစားအဖြစ်, ဂီတသင်ခန်းစာများကို, နှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်း. အမေရိကန်တွေဖြစ်ကြနဲ့တူတစ်ခါတစ်ရံသင်ခံစားမိစေခြင်းငှါ “ပတ်ပတ်လည်ပြေး” လျှော့ပေါ့ဘို့အနည်းငယ်သာအချိန်နှင့်အတူ. သူတို့တစ်တွေအများကြီးပြီးပြီ get သောအခါမူကားများစွာသောအမေရိကန်တွေကိုသူတို့အကောင်းခံစားမိ.
•ပြိုင်ပွဲကျောင်းမှာမြင်နိုင်ပါသည်, အလုပ်ခွင်ထဲမှာ, နှင့်အားကစားအတွက်. ဥပမာ, ကျောင်းသားများအကောင်းဆုံးအဆင့်အောင်မြင်ရန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါ. တစ်ခါတစ်ရံယှဉ်ပြိုင်အုပ်စုများကပါဝင်ပတ်သက်, ထိုကဲ့သို့သောဘောလုံးအသင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းလေ့လာမှုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်.
•အမေရိကန်တွေကိုလည်း may “ယှဉ်ပြိုင်” သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်အတူ. အတော်များများကအမေရိကန်တွေသူတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုမှာတိုးတက်အောင်စောင့်ရှောက်ဖို့ကွိုးစားအားထု. ဥပမာ, သူတို့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုပြု၏ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရှေ့တော်၌ထိုနှစ်တွင်လုပ်ခဲ့တယ်ထက်သူတို့အလုပ်ပိုပစ္စည်းများရောင်းဖို့လိုပေမည်ထက်သူတို့ပိုမြန်မယ့်အပြေးပြိုင်ပွဲကို run ဖို့လိုပေမည်.
ယေဘုယျအား, ယှဉ်ပြိုင်မှုအပေါ်ထားရှိတန်ဖိုးကိုအချို့ကိုသင်ယဉ်ကျေးမှုထိတ်လန့်ခံစားရပါစေခြင်းငှါ, သငျသညျအပြိုင်အဆိုင်ထက်ပိုပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောယဉ်ကျေးမှုမှ လာ. အထူးသဖြင့်လျှင်.
အမေရိကန်တွေဟာသူတို့ရဲ့အချိန်ပေါ်တန်ဖိုးကိုအများကြီးနေရာ. သူတို့တစ်စုံတစ်ဦးသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုသူတို့ရဲ့အချိန်ဖြုန်းထားပြီးစဉ်းစားပါလျှင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားစိတ်ပျက်ခံစားရပေမည်. တချို့ကအမေရိကန်တွေဂရုတစိုက်မိမိတို့၏အချိန်ထွက်စီစဉ်, သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝတွေကိုနှင့်၎င်းတို့၏အလုပ်ဘဝတွေကိုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျနေ့စဉ်ပြက္ခဒိန်ကို အသုံးပြု.. အမေရိကရှိတစ်ဦးစကားပုံရှိပါသည်: အချိန်ကငွေဖြစ်ပါသည်. ဤသည်အများအပြားအမေရိကန်တွေဟာသူတို့ရဲ့အချိန်အသုံးပြုလိုဆိုလိုတယ် “ထိထိရောက်ရောက်” - သူတို့ကအများဆုံးအချိန်အတိုဆုံးပမာဏကို၌ပြစ်မှားမိဖို့လိုခငျြ.
ဒါဟာသင်ဖို့အသုံးပြုနေကြတယ်ဆိုတာကိုထံမှကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသဘောတူညီမှုအောင်လိုက်တဲ့အခါ, သင်ကတခြားသူတစ်ဦးကိုသိရန်လာပြီအချိန်ဖြုန်းစေခြင်းငှါ, လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်ကော်ဖီသောက်သုံးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, ဒီမကြာခဏအမှုမဟုတ်ပါ.
အစည်းအဝေးများ, အထူးသဖြင့်အလုပျအတှကျ: သငျသညျအချိန်ပေါ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားသင့်တယ် – ဖြစ်ကောင်းပင်5မိနစ်အစောပိုင်း.
ချိန်း: သငျသညျဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့ချိန်းဆိုမှုသို့မဟုတ်ချိန်း၏အချို့သောအခြားမျိုးရှိပါက, သငျသညျအချိန်ပေါ်ရောက်လာရန်လိုအပ်ပါတယ်. သင်ဆဲခန့်အပ်ဘို့စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိစေခြင်းငှါ. သို့သော်, သင်အချိန်ပေါ်မှာသို့မဟုတ်သင်ရက်ချိန်းပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးရန်ရှိစေခြင်းငှါအရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူလှုပ်ရှားမှုများ: သငျသညျညစာစားဘို့တစ်စုံတစ်ဦး၏အိမ်တော်ရန်ဖိတ်ခေါ်နေတယ်ဆိုရင်, အချိန်ပေါ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစား – သငျသညျဖွစျစနေို5သို့မဟုတ် 10 မိနစ်နှောင်းပိုင်းတွင်, သို့သော်သင်အများကြီးအကြာတွင်ထက်လျှင်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းမခေါ်နဲ့သူတို့ကိုသိစေသင့်တယ်.
ပါတီတွေက: သေးငယ်တဲ့ပါတီများအတွက်, အတွင်းရောက်ရှိမည် 15 ပေးထားတဲ့အချိန်မိနစ်. များစွာသောလူတို့နှင့်အတူကြီးမားတဲ့ပါတီများအတွက်, သငျသညျဖွစျစနေို 30 သို့ 40 မိနစ်နှောင်းပိုင်းတွင်.
A ကောင်းဆုံးအုပ်ချုပ်မှုကိုသငျသညျအနှောင်းပိုင်းဖြစ်သွားကြသည်အချိန်မရွေးဖြစ်ပါသည်, သင်တွေ့ဆုံနေသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုသင်နှောင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုသိမခေါ်နဲ့ကွကုနျအံ့သငျ့သညျ. သငျသညျမခေါ်နိုင်မယ်ဆိုရင်, သငျသညျရောက်လာသည့်အခါသင်နောက်ကျတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်များမှာလူတစ်ဦးကိုပြောပြသင့်တယ်.
တခါတလေ, တစ်စုံတစ်ဦးကအလွန်လျှင်မြန်စွာထွက်ခွာသို့မဟုတ်စွန့်ခွာရန်အလျင်ဖြစ်ပါသည်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပေမည်. သူတို့ဖြစ်ချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကဖြစ်နိုင်သည် “အချိန်မှန်” သူတို့ရဲ့နောက်လာမည့်ရက်ချိန်းများအတွက်. ဒါဟာသူတို့သင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြဘူးမဆိုလိုပါ.
သငျသညျအနှောင်းပိုင်းလျှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်ပေါ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အချိန်သတိထားဖြစ်ခြင်းသင်ဖြစ်နိုင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်, သင်သည်သင်၏အလုပ်ဆုံးရှုံးနိုင်, သင့်ရဲ့ချိန်းလက်လွတ်, သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦး၏ခံစားခကျြကိုထိခိုက်စေ. သငျသညျအချိန်အမေရိကန်အဓိပ္ပာယ်မှညှိမယ့်ခက်ခဲအချိန်ရှိပါက, သင်အချိန်ကိုသင်သတိပေးနှိုးဆော်သံရှိပါတယ်တဲ့လက်ပတ်နာရီသို့မဟုတ်ဖုန်းရဖို့လိုပေမည်, အထူးသဖြင့်အလုပ်ရတဲ့အတှကျ.
အမေရိကန်တွေဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်အပေါ်အလွန်အာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်. တခါတရံမှာအခြားယဉ်ကျေးမှုကနေလူတွေကိုအမေရိကန်တွေထင်တယ် “အသက်ရှင်နေထိုင်-to-အလုပ်” သို့မဟုတ်များမှာ “စေချင်တာလေးမျိုး။” ဤသည်ကိုသူတို့အမေရိကန်တွေအလွန်အကျွံအလုပ်လုပ်ထင်ဆိုလိုတယ်. အမေရိကန်တွေအလုပ်များနှင့်တက်ကြွဖြစ်ခြင်းမကြာခဏကောင်းတစ်ဦးအရာအဖြစ်ရှုမြင်ကြောင့်အလုပ်-oriented ဖြစ်ပါတယ်များမှာအကြောင်းရင်း၏တစိတ်တပိုင်း. ပြည်သူ့လည်း၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များနှင့်အတူပြင်းထန်စွာခွဲခြားသတ်မှတ်လေ့. ဥပမာ, သင်ပထမဦးဆုံးသူတစ်ဦးဦးနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရသောအခါ, သူတို့သည်သင့်ကိုမေးလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် “သင်ဘာလုပ်ပါသလဲ?” သူတို့ဟာဆိုလို, “သငျသညျအလုပျအဘယ်အရာကိုမျိုးကိုပြုကြ?”
မိသားစုများ၏နေအိမ်ဆည်းပူးနေစောင့်ရှောက်မှုမှာအလုပ်မလုပ်တဲ့သူယောက်ျားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတွေမကြာခဏသူတို့ကိုယ်သူတို့မခေါ် “Home-ချမှတ်သူများ” နှင့်သလောက်အခြားမည်သည့်အတိုင်းဤသိမ်းပိုက်ဘို့လေးစားမှုထိုက်. မဆိုကြင်နာတစ်ဦးလျှောက်လွှာဖြည့်စွက်ရတဲ့အခါ, ရေးသားဖို့ OK ကိုက “Home-ထုတ်လုပ်တဲ့” အိမ်အပြင်ဘက်တစ်ဦးပေးဆောင်အလုပ်ရှိသည်ပါဘူးသူတစ်ဦးများအတွက်အလုပ်အကိုင်အဖြစ်.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖို့မျက်နှာသစ်အဖြစ်, သငျသညျတခါတရံအမေရိကန်တွေရုပ်ဝါဒထင်ရထင်စေခြင်းငှါ - အမှုအရာပိုင်ဆိုင်နှင့်ဝယ်ယူအပေါ်အာရုံစူးစိုက်. ဒီအကြောင်းရင်း၏အစိတ်အပိုင်းများစွာကိုအမေရိကန်တွေတန်ဖိုးကယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အလုပ်ဖြစ်ပါသည်. သောကြောင့်အမေရိကန်တွေတန်ဖိုးအားယှဉ်ပြိုင်, သူတို့ချင်တယ် “ဆက်လက်တည်ရှိသည်” သူတို့ကိုလှည့်ပတ်သူတို့နှင့်အတူ. ဆိုလိုတာက, ဥပမာ, သင်၏အိမ်နီးချင်းတစ်ဦးကားအသစ်ရတယ်လျှင်, သင်သည်လည်းအသစ်တစ်ခုကိုကားတစ်စီးချင်ပေလိမ့်မည်. အမေရိကန်တွေကဒီကိုခေါ် “အဆိုပါ Joneses အတူတက် Keeping ။”
အတော်များများကအမေရိကန်တွေအလုပ်တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်အားကြီးသောအလုပ်ကျင့်ဝတ်များ. အတော်များများကအမေရိကန်တွေထိုကဲ့သို့သောသူတို့အလုပျမှာအောင်မြင်သောဖြစ်ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့နည်းလမ်းတခုအဖြစ်တီဗီသို့မဟုတ်ဖိနပ်အဖြစ်ပစ္စည်းပစ္စည်းများကိုကြည့်ရှုရန်. အမေရိကန်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုများအတွက်ဆုလာဘ်များနှင့်အားထုတ်မှုအဖြစ်ပစ္စည်းပစ္စည်းများထင်စေခြင်းငှါ.
အများအပြားအမေရိကန်တွေ newness နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုတန်ဖိုးထားသောကွောငျ့အမေရိကန်တွေ object-oriented ဖြစ်နိုင်သည်နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်သူတို့ကအလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ဖုန်းလျှင်ပင်, ဒါကြောင့်အသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် features တွေရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တစ်တွေဖုန်းအသစ်လိုပေမည်. သငျသညျလေးစားခံရဖို့သငျသညျဥစ္စာအများကြီးရှိရမည်ခံစားရရန်မလိုပါ. သငျသညျရိုးရှင်းစွာသက်သာလူနေမှုခံစားရသို့မဟုတ်သင်ကြိုက်တတ်တဲ့မဆိုလမ်းသင့်တယ်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက်ပိုပြီးပိုက်ဆံချွေတာ, ပညာရေးနှင့်အငြိမ်းစားထက်အခြားသူများအားအထင်ကြီးဖို့တ္ထုအပေါ်ဖြုန်း.
အထက်ပါထုတ်ပြန်ချက်များအားလုံးသည်အမေရိကန်တန်ဖိုးများစဉ်မြေးဆက်. ယေဘုယျအားဖြင့်အစဉ်အမြဲစစ်မှန်တဲ့မဟုတ်, ဒါပေမယ့်အမှုအရာကိုမကြာခဏစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ကြောင်း. အမေရိကန်သငျသညျနားမလညျတဲ့လမ်းအတွက်သရုပ်ဆောင်စေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့် RCO ၏ရည်မှန်းချက်ကိုသင်ပိုကောင်းနားလည်ကူညီရန်ယေဘုယျပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်. သတိရ, မလမ်းအခြားလမ်းထက် သာ. ကောင်း၏ - မယ့်ကွဲပြားခြားနားသော.